लकडाउन पनि वरदान सावित भएपछि...! (भिडियो)
काठमाडौं ।कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछि पनि जारी गरिएका निषेधाज्ञाले धेरै उद्योग कलकारखाना प्रभावित भए । यो अवधिमा धेरै मानिसहरु बेरोजगार भए। धेरैलाई प्रतिकुल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरु भने अहिले स्वरोजगार बन्दै आम्दानी गरिरहेका छन् । ﻿ लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सफल एक उदाहरणिय व्यक्ति बनेका छन् हेटौडा–६ शान्तिटोलका भरत सापकोटा । लकडाउनका कारण आफूले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेको नीजि विद्यालय बन्द भएपछि उनलाई बैंकको व्याज तिर्न समेत समस्या भयो । त्यसैले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनमा व्यवसायिक ढंगबाट एकिकृत कृषि फार्मको सुरुवात गरे । लकडाउनकै बीचमा कुखुरा, माछा र तरकारी खेती सुरु गरेका सापकोटाले अहिले आम्दानी लिन थालेका छन् ।यस्तै लकडाउनभन्दा अगाडि हार्डवेयर र कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरिरहेका हेटौंडा–६ चुच्चेखोलाका प्रमेश पराजुली र कल्पना पराजुलीको परिवारले पनि लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीक तरकारी खेती शुरु गरेको छ । बेमौसमी तरकारी खेती शुरु गरेका उनीहरुको परिवारले पहिलो उत्पादनमै ३ लाख रुपैयाँ बढीको तरकारी विक्री गर्न सफल भएको छ । लकडाउनको प्रतिकुल समयलाई सदुपयोग गरेका उनीहरु आफू त स्वरोजगार भए नै अरुलाई पनि काम दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई लक्षित गरेर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ ले स्वरोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको छ । बेरोजगारहरुलाई व्यवसायिक कृषि, पशुपालन, माछापालन जस्ता क्षेत्रमा अनुदानको लागि वडा कार्यालयले लगानी गरेको छ । यसबाट रोजगार गुमाएका, विपन्न परिवार र एकल महिलाले लाभ हासिल गरेका छन् ।हेटौंडा–६ मा मात्रै लकडाउनपछि ४० भन्दा बढी परिवारले व्यवसायीक कृषिलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रुपमा अगाडि बढाएका छन् । तर सीपमुलक तालिम र पर्याप्त लगानी नहुँदा उनीहरुले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकिरहेका छैनन् । राज्यले लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रतिकुल समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएकाहरुलाई प्राविधिक ज्ञान, कृषि औजार र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लकडाउन पनि वरदान सावित भएपछि…! (भिडियो)
६ मंसिर २०७७, शनिबार १४:११
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछि पनि जारी गरिएका निषेधाज्ञाले धेरै उद्योग कलकारखाना प्रभावित भए । यो अवधिमा धेरै मानिसहरु बेरोजगार भए। धेरैलाई प्रतिकुल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरु भने अहिले स्वरोजगार बन्दै आम्दानी गरिरहेका छन् ।
लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सफल एक उदाहरणिय व्यक्ति बनेका छन् हेटौडा–६ शान्तिटोलका भरत सापकोटा । लकडाउनका कारण आफूले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेको नीजि विद्यालय बन्द भएपछि उनलाई बैंकको व्याज तिर्न समेत समस्या भयो । त्यसैले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनमा व्यवसायिक ढंगबाट एकिकृत कृषि फार्मको सुरुवात गरे । लकडाउनकै बीचमा कुखुरा, माछा र तरकारी खेती सुरु गरेका सापकोटाले अहिले आम्दानी लिन थालेका छन् ।
यस्तै लकडाउनभन्दा अगाडि हार्डवेयर र कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरिरहेका हेटौंडा–६ चुच्चेखोलाका प्रमेश पराजुली र कल्पना पराजुलीको परिवारले पनि लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीक तरकारी खेती शुरु गरेको छ । बेमौसमी तरकारी खेती शुरु गरेका उनीहरुको परिवारले पहिलो उत्पादनमै ३ लाख रुपैयाँ बढीको तरकारी विक्री गर्न सफल भएको छ । लकडाउनको प्रतिकुल समयलाई सदुपयोग गरेका उनीहरु आफू त स्वरोजगार भए नै अरुलाई पनि काम दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
हेटौंडा–६ मा मात्रै लकडाउनपछि ४० भन्दा बढी परिवारले व्यवसायीक कृषिलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रुपमा अगाडि बढाएका छन् । तर सीपमुलक तालिम र पर्याप्त लगानी नहुँदा उनीहरुले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकिरहेका छैनन् । राज्यले लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रतिकुल समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएकाहरुलाई प्राविधिक ज्ञान, कृषि औजार र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
Prevलुम्बिनीमा पर्यटकको स्वागतका लागि पर्यटन व्यवसायी तयार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका जेठा छोरा पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितNext